कसरी सफल हुने - विचार - नारी
कसरी सफल हुने
वैशाख २६, २०७४
आधुनिकतासँगै मानिसका आवश्यकताहरू पनि फेरिएका छन् । यससँगै जीवनशैली नफेरिने कुरै भएन । बढ्दो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि महिला–पुरुष दुवै कामकाजी हुनुपर्ने बाध्यता छ । फलत: पुरुषको वर्चस्व भएका कतिपय क्षेत्रमा महिलाहरू पनि अग्रसर हुन थालेका छन् । महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल छन् । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू आफ्नो छुट्टै पहिचान तथा अस्तित्व कायम गर्न लागिपरिरहेको यो अवस्थामा महिलाले कसरी सफलता प्राप्त गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ ।
हरेक क्षेत्रमा प्रगतिको मुख्य औजार शिक्षा हो । मानिस सिकाइबाटै शिक्षित हुन्छ । अत: आफूलाई बढी शिक्षित बनाउन विभिन्न पुस्तक पढ्नुका साथै सभा, सम्मेलन, कार्यशाला एवं समारोहहरूमा भाग लिनुपर्छ ।
सफलता प्राप्तिका लागि योजना प्रमुख कुरा हो । जस्तो किसिमको करियर छनोट गरिँदैछ उक्त क्षेत्रका बारेमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी एवं ज्ञान जुटाउनु आवश्यक हुन्छ ।
जुनसुकै क्षेत्र किन नहोस् त्यसमा सफल हुन वक्तृत्वकला पनि प्रमुख हतियार हो । बोलीमा निपुण भएर अरूलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले गरिने वार्तालापले सफलताको सिंढी चढ्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
आजको जमाना सहकार्यको हो । जोसँग ठूलो समूह अर्थात् नेटवर्किङ छ ऊ शक्तिशाली कहलिन्छ । त्यसकारण सफल र शक्तिशाली कहलिन आफ्नो जनसम्पर्क बिस्तार गर्न केही समय छुट्याउनु जरुरी हुन्छ ।
जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आत्मविश्वास डगमगाउन नदिई अघि बढे सफलताको शिखर चुम्न कसैले रोक्न सक्दैनन् ।
सफल महिलाहरू अनुशासनमा ठूलो विश्वास राख्छन् । अनुशासित जीवन एवं कामले छवि स्वच्छ रहनुका साथै अरूले गर्ने मूल्यांकन पनि उच्च हुन्छ ।
समयसँगै चल्ने कला
हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न समयसँगै अघि बढ्न सक्ने खुबी आवश्यक हुन्छ ।
हरेक सफलताका पछाडि कसै न कसैको हात हुन्छ । तसर्थ यस्तो मित्र बनाउनु आवश्यक छ जसले कठिन परिस्थितिमा पनि साथ दिएर अघि बढाउन सहयोग गरोस् ।
आफ्नो काम र क्षेत्रअनुकूलको पहिरन लगाउनुपर्छ । सही वेशभूषाले व्यक्तित्वमा निखार ल्याउँछ जसबाट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई सजिलै आफूतिर आकर्षित तुल्याउन सकिन्छ अनि प्रथम भेटमै प्रभावशाली छवि छाड्न मद्दत मिल्छ ।
भाद्र ३, २०७५ - को हुने हो हिट सारा र पूजा
असार १९, २०७५ - महिलामाथिको बोझ कसरी कम गर्ने ?
जेष्ठ २४, २०७५ - होमवर्कको झन्झटबाट कसरी बच्ने ?
जेष्ठ २०, २०७५ - मेहन्दी कसरी लगाउने ?
परसेन्टेज कि प्रतिभा ? श्रावण २३, २०७५
अझै रोइरहेकी छिन् गौरा श्रावण २२, २०७५